Fampitaovana ny orinasanao ho an'ny horonantsary matihanina | Martech Zone
Fampitaovana ny orinasanao ho an'ny horonan-tsary matihanina
Wednesday, May 15, 2013 Sabotsy, Janoary 23, 2021 Douglas Karr
Niasa nandritra ny volana vitsivitsy lasa izahay mba hahazoana fitaovana video DK New Media. Raha mbola manana isika orinasan-tsary tsy mampino fa nahavita fiakarana mafy isika indraindray, hitantsika fa te handraikitra sy mampifangaro horonantsary koa izahay - ary tianay ho matihanina izany. Ny mpamoron-tsary anay dia mahay ihany koa amin'ny fampifangaroana horonantsary sy feo ka dia nandeha nitady fitaovana fototra hanombohana izahay.
Ataovy ao an-tsaina fa tsy manangana masoivoho horonan-tsary matihanina izahay fa mianatra fotsiny ary tsy te handrava ny banky amin'ny fanombohana. Mila fitaovana tsara izahay, fa tsy mila ny tsara indrindra. Tsy mila fitaovana misimisy ihany koa izahay. Nanontany tamin'ny ekipa horonan-tsary ihany koa izahay ExactTarget, izay mamoaka horonantsary matetika.
Ny lisitr'ireo fampitaovana horonantsary fototra dia ahitana ny fakantsary DSLR, mikrofona lavalier, mpitam-boky marobe ary jiro. Afaka manampy efijery maitso ianao raha tianao, fa tsy mikasa ny hanao efijery maitso izahay. Ity a horonantsary avy amin'ny DSLRHD izay manome fahitana vitsivitsy amin'ny fisafidianana ireo mikrô sy ny mpitam-peo mety - lakilen'ny fandraketana horonantsary mahafinaritra.
Fitaovana horonan-tsary ho an'ny orinasanao
Ity misy fizarana lisitr'ireo fitaovana sy vidiny eo ho eo:
Camera - Canon EOS Rebel T3 12.2 MP CMOS Digital SLR Camera miaraka amin'ny EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II Zoom Lens & EF 75-300mm f / 4-5.6 III Telephoto Zoom Lens + 10pc Bundle 16GB Deluxe Accessory Kit. Ny zoom an-telefaona dia nanoro anao mba hahafahanao mahazo lalina lalina eo amin'ny sarinao miaraka amin'ny fifantohana betsaka amin'ilay olona sy ny fiaviany manjavona. Azonao atao ny mividy fakan-tsary lafo vidy kokoa izay misy endri-javatra betsaka lavitra… saingy ity no kitapo fototra ilaintsika hanombohana. Ny vidiny dia 550 $ eo ho eo.
mikrô - Sennheiser EW 112P G3-Rafitra EW omni-directional. Hatreto dia io no tena niompanan'ireo mpaka sary an-tsehatra anay ary nampitandrina anay izy ireo mba tsy hitehirizana. Ny Sennheisers dia mateza - tena ilaina satria tsy fonosina, apetaho amin'ny olona ary esorina amin'ny olona isaky ny manoratra ianao. Ary koa, ny marimaritra iraisana dia ny fahaizan'izy ireo mahatoky amin'ny valin-kafatra sy tabataba. Ny vidiny ho an'ny tsirairay dia $ 630! Ouch.
mpitam-boky - Zoom H2n Handy Digital Multitrack Recorder Bundle. Ity koa dia manana mikrônô stereo voaorina tsara raha ilaina izany. 200 $ ny vidiny.
Lighting - CowboyStudio 2275 Watt Digital Video Kitapo Kitapo Softbox / Boom Set. Na dia manome hazavana bebe kokoa aza ny jiro LED ary tsy mandray habaka be loatra, dia lafo be (1,600 $ eo ho eo). Ity kit studio studio Cowboy ity dia mila karakaraina tsara nefa hanome jiro ilainao hahazoana sary tsara eto an-tany. Mety tianao izany mijery horonantsary vitsivitsy amin'ny fametrahana! Ny vidiny dia $ 220
Azafady mba tadidio fa tsy mpanoratra horonan-tsary matihanina no anoratako an'ity. Azontsika atao ny manatsara ny fitaovantsika any aoriana… ny jiro LED no mety ho fanavaozana voalohany ary, satria mahay ny DSLR ny mpamorona antsika… angamba ny fakantsary.
Ny tanjontsika eto indray dia ny tsy hividy ny tsara indrindra… ny hividy fitaovana fanombohana izay afaka manampy antsika hamokatra horonan-tsary matihanina nefa tsy handrava ny banky. Ity setup ity dia manodidina ny $ 1,600 (tsy tafiditra ao ny haba sy ny fandefasana).
Fampahafantarana: Ireo rohy rehetra eto dia mampiasa ny rohy afiliana Amazon.
Azoko antoka fa hanana hevitra maro ity lahatsoratra ity! Inona ny anao?
Tags: 1080phoronantsary fandraharahanampikomy amin'ny kanônacowboystudioDSLRdslr hdlavalier micKitendrymikrômpitam-boky multi-tracksennheisterjiro video
Ny antsasaky ny fiainana ny media sosialy meltdown